U-MTN uxwayisa amakhasimende ngokuqolwa okuqhubekayo | News24
Johannesburg – Isikhondlakhondla senkampani yezokuxhumana, u-MTN, usuxwayise amakhasimende awo ngokuqolwa okuqhubekayo okuphathelene nokushintshwa kwamakhadi omakhalekhukhukhwini (SIM swap) nokuhloswe ngakho ukuthola imininingwane yangasese yamakhasimende.
“Kulokhu kuqolwa, ozenza umsebenzi we-call centre yakwa-MTN ucela imininingwane yezokuphepha yekhasimende ngaphansi kwesizathu sokuthi kuvalwa ukuqhubeka kwesicelo se-SIM swap esenziwe enombolweni yekhasimende ngaphandle kokwazi kwalo noma ukugunyaza,” u-MTN usho kanjalo esitatimendeni.
OLUNYE UDABA:Nazi izibhedlela ezingu-20 ezihamba phambili eMzansi
Le nkampani iqhube yathi la maqola abe eseqhubeka esesebenzisa izimpendulo azinikezwe ikhasimende engxoxweni ukuze enze i-SIM swap ngokuwumkhonyovu.
“Kubalulekile kumakhasimende ukwazi ukuthi uMTN angeke uwathinte amakhasimende e-call centre yawo ukuvimba ukuqhubeka kwesicelo se-SIM swap,” u-MTN usho kanjalo.
Uma ngabe sekuphothulwe uhlelo lwe-SIM swap – okuwukusebenzisa inombolo efanayo ekhadini elihlukile – amaqola abe esesebenzisa imininingwane yekhasimende ukuze enze izenzo eziwukukhwabanisa ezifana nokuvuselelwa kwezinkontileka zomakhalekhukhwini.